Macaawinada dalalka soo koraya oo wax laga beddelay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Raina Medelius/Sveriges Radio.
Macaawinada dalalka soo koraya oo wax laga beddelay
Publicerat tisdag 2 april 2013 kl 10.45
Hay’adda macaawinada dalalka soo koraya (SIDA) ayaa soo jeedisay ra’yi macaawinada looga joojinayo dalalka Boliifiya, Kolombiya iyo Guwaatemaala.
Wuxuuna ra’yigaani salka ku hayaa in miisaaniyadda dowladda ee sannadkaan lagu caddeeyey in la caawino dadka saboolka ah oo ku nool dalalka fakhriga ah. Hay’adda SIDA waxay sheegtay in dalalka Boliifiya, Kolombiya iyo Guwaatemaala hadda rasmi ahaan lagu tiriyo dalal uu dadkooda soo galo dakhli dhexe. Sidaas awgeed waa in la joojiyaa macaawinada gaareysa ilaa shan boqol oo milyan.
Ra’yiga dhinacyo badan ayey cambaarayn uga timid. Christer Winbäck oo xisbiga dadweynaha u qaabbilsan siyaasadda macaawinada ayaa doonaya in dowladdu ay arrintaan ka wadaxaajooto si looga hortago joojinta macaawinada.
- Anigu qof ahaan shaki weyn ayaan ka qabaa arrintaan. Wakhtigaan xaadirka ah dad ayaa noo joogaa dalalka Boliifiya, Kolombiya iyo Guwaatemaala, halkaas oo aan dadaal ugu jirno sidii aan gacan uga geysan lahayn horumarinta dimoqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Waxaa noo muuqda in weli wax dhiman yihiin oo aan gacan ka geysan karno isbeddel wanaagsan oo ka hirgala dalalkaas.
Isbeddelka siyaasadda macaawinada Iswiidhen wuxuu sababi karaa in aysan macaawinada iswiidhishku bixiyo gaarin dadyow badan oo sabool ah oo ku nool dunida dacalladeeda. Sida wasiirka macaawinada Gunilla Carlsson ku qortay miisaaniyadda sannadka waxay afar meelood saddex meelood dadyowga saboolka ahi ku nool yihiin dalalka dakhliga dhexe. Waxay sheegtay in su’aasha khuseysa gobolka Laatin Ameerika looga xaajoon doono dowladda dhexdeeda, hadafkuse waa in la yareeyo dalalka macaawinada la siiyo.
- Waxaa dunida ka jira saboolnimo ballaaran iyo cadaadis, laakiin Iswiidhen meel walba gacan kama geysan karto.
Boliifiya, Kolombiya iyo Guwaatemaala waxay yihiin saddexdii dal ee ugu dambeeyey gobolka Laatin Ameerika oo Iswiidhen ay macaawino siiso.